Amarekhodi Esimo Sezulu ka-2016 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngonyaka odlule kwaba nemfudumalo kakhulu selokhu idatha yaqala ukurekhodwa ngo-1880. Njengoba izinga lokushisa lingu-1,1ºC liphakeme kunangesikhathi sangaphambi kwezimboni, isintu manje sesibheke endaweni engaziwa, okuzobeka isimo saso samanje engcupheni. indlela yokuphila ngaphandle kokuthi uthathe izinyathelo eziphuthumayo ukuyivimba.
Ake sibuyekeze i- uqopha ukuthi isimo sezulu sagqashuka ngo-2016.
I-WMO ishicilele ngoLwesibili olwedlule, Mashi 21, 2017 umbiko wayo waminyaka yonke ngesimo sezulu sezulu, esincike emininingwaneni eminingi yamazwe etholwe ngokuzimela yizikhungo zokuhlaziya isimo sezulu zomhlaba wonke. Ngakho-ke, ngenxa yalolu shicilelo, sizokwazi ukuthola umbono wokuthi kwenzakalani emhlabeni wonke, hhayi kuphela endaweni esihlala kuyo.
Ukuguquka kwesimo sezulu kungumcimbi wembulunga yonke ngakho-ke kuthinta yonke iplanethi. Ngokombiko, hhayi kuphela izinga lokushisa elijwayelekile elalingu-1,1ºC ngaphezu kwesikhathi sangaphambi kwezimboni, okwakungu-0,6ºC, kepha futhi izinga lokushisa lolwandle laliphakeme kunokujwayelekile.
Isithombe - Twitter @WMO
Ngamazinga akhulayo e-carbon dioxide emkhathini, ithonya lemisebenzi yabantu kwisimo sezulu liya ngokuya libonakalakusho uNobhala Jikelele we-WMO uPeter Pettai Taalas. Ngoba amathuluzi wamanje wokusebenzisa ama-computer asetholakala manje, akwazi ukuqoqa futhi aqhathanise imininingwane, ososayensi bangakhombisa ukuthi ubuntu bunikela kangakanani ekuguqukeni kwesimo sezulu.
Ngakho-ke, singazi ukuthi eminyakeni eyishumi nesithupha edlule unyaka ngamunye bebefudumele okungenani u-16 0,4.C kunalowo owedlule, kuthatha isikhathi sika-1961-1990 njengesethenjwa. Ngesikhathi sokwenzeka kwe I-El Niño kusuka ku-2015/2016, ulwandle lwakhuphuka ngaphezu kokujwayelekile, kuyilapho iqhwa lezinti lincibilika.
Ngokushisa okufudumele, kwenzeka izehlakalo zesimo sezulu esibi kakhulu, njenge isomiso esibi kakhulu eningizimu nasempumalanga ye-Afrika kanye naseMelika Ephakathi. Futhi asikwazi ukukhohlwa ngakho Isiphepho uMathewu, eyafinyelela esigabeni sesi-5 esikalini sikaSaffir-Simpson futhi yabangela ukufa kwabantu abangu-1655, iningi labo eHaiti. Ngakolunye uhlangothi lomhlaba, e-Asia, izimvula ezinamandla nezikhukhula kuthinte empumalanga naseningizimu yezwekazi.
Yize sekudlule unyaka ka-2016, kulo nyaka, noma ngaphandle kwethonya lika-El Niño, izehlakalo zezulu ezimbi kakhulu zizoqhubeka zenzeke.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo sezulu ngo-2016 sephule amarekhodi amaningi